५२ मध्ये ५० स्थानको नतिजा सार्वजनिक, कसले कति सिट हात पारे ? यस्तो छ ताजा अपडेट — Imandarmedia.com
५२ मध्ये ५० स्थानको नतिजा सार्वजनिक, कसले कति सिट हात पारे ? यस्तो छ ताजा अपडेट
काठमाडौं । देशभरका ५२ स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर र धरानकै वडा नम्बर ७ को वडाध्यक्ष बाहेक अन्य ५० स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ । एकमात्र प्रतिनिधिसभा कास्की क्षेत्रनम्बर २ सहित २९ स्थानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार बिजयी भएका छन् । नेकपाले उपचुनावबाट यसअघि हारेका ३ गाउँपालिका थप्दा यसअघि जितेको एक प्रदेशसभा गुमाएको छ ।
प्रदेशसभाका ३ सिटमध्ये भक्तपुर क्षेत्रनम्बर १ (क) कांग्रेस विजयी हुँदा दाङ क्षेत्रनम्बर ३ (ख)मा नेकपा र बागलुङ क्षेत्रनम्बर २ (ख)मा नेकपा समर्थित राजमोले जितेका छन् । यसअघि जित्दै आएको धरान उपहानगरपालिकामा नेकपा मतगणनामा शुरुदेखि नै पछि छ । करिब १० हजार मत गन्न बाँकी रहदा नेकपा एक हजार मतले पछि परेको छ । धरानको वडा नम्बर ७ पनि यसअघि नेकपाले नै जितेको थियो ।
नेकपाले प्रतिनिधिसभासहित दाङको प्रदेशसभा र उपनिर्वाचन भएका सबै गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जितेको छ । उपनिर्वाचन भएका देशभरका ४३ वडामध्ये धरान गन्न बाँकी रहँदा २३ वडाध्यक्ष नेकपाले जितेको छ । बागलुङको प्रदेशसभा सदस्यमा नेकपा समर्थित राष्ट्रिय जनमोर्चाले जितेको छ भने प्युठानको ऐरावत गाउँपालिका ३ को वडाध्यक्षमा स्थानीय नेकपा नेताहरुको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका बागी उम्मेदवारले जितेका छन् ।
हुम्लाका खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्षमा नेकपाकी दीपा शाही निर्वाचित भएकी छन् । यसअघि सो गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो । कांग्रेसले दुई गाउँपालिका र राजपाले एक गाउँपालिका गुमाउँदा नेकपाले तीन गाउँपालिका थप गरेको छ ।